[AIVD ALARM]: မာတင် Vrijland
အဆိုပါ AIVD အရှေ့ဂျာမန်၏နည်းဗျူဟာ (GDR) ရှတာဇီနယ်သာလန်သို့တင်သွင်းမွမ်းမံ?
အတွက် Filed [AIVD ALARM], NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	4 စက်တင်ဘာလ 2017 အပေါ်	• 19 မှတ်ချက်
အဆိုပါရှတာဇီစစ်အေးတိုက်ပွဲကာလအတွင်းအဓိကဂျာမန်အရှေ့ထောက်လှမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်ကမ္ဘာ့ထိရောက်မှုအရှိဆုံးအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရှတာဇီလျှို့ဝှက်ချက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆိုဗီယက်၏ KGB ကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ဘာလင်တံတိုင်းပြိုလဲပြီးနောက် 1990 အတွက်ရှတာဇီကတရားဝင် [ ... ] နိုင်ပါတယ်ရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်
အတွက် Filed [AIVD ALARM], NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	2 စက်တင်ဘာလ 2017 အပေါ်	• 19 မှတ်ချက်
သင် "အိုးကမ run အားလုံးဒီတော့အစာရှောင်ခြင်း, ပါလိမ့်မယ်" ထို့နောက်သင်သတိထားရမှာကြပြီမဟုတ်စဉ်းစားပါ။ [ ... ] "အိုးကောင်းကောင်း, ထို့နောက်သင်သည်လျော့နည်းသင်ထင်အဘယ်သို့ဆိုငါပေးစေခြင်းငှါဘာမှမနှင့်အရာရာကိုအကြောင်းကိုကျနော့်အမြင်လိုအပ်ကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးမဟုတ်ဘူး": သင့်ရဲ့ပခုံးကိုချီနှင့်သင်ထင်
ဒါဟာ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်ရိုးရာဓလေ့ကလေးကယဇျပူဇျော '' တည်ရှိသို့မဟုတ်မဟုတ်လော
အတွက် Filed [AIVD ALARM], NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 29 2017 အပေါ်	• 27 မှတ်ချက်
ဒါဟာကိုယ့်ကိုအနည်းငယ်နားလည်မှုလွဲဖယ်ရှားရမည်။ ငါရော်နယ်အောင်နိုင်ဘားကလူပူးပေါင်းကြံစည်မှုသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့ဖို့စိတျဝငျစားတဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့အတူပူးပေါင်းစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ရွှင်လန်းဘဏ်ဖြစ်လာဖို့ NLP နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့သူအနေနဲ့သရုပ်ဆောင်ကြောင်းပြောတဲ့အခါသူက [ ... ] ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်ရိုးရာဓလေ့ယဇျပူဇျောမဆိုလိုပါ
ရော်နယ်အောင်နိုင်ဘား debacle နှင့်ထိန်းချုပ်ထားဖြိုဖျက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ
အတွက် Filed [AIVD ALARM], NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 28 2017 အပေါ်	• 16 မှတ်ချက်
အင်တာနက်ကိုကြွတော်မူသောအခါရုံစိတ်ကူးခဲ့နှင့်ပိုပြီးမြန်နှုန်းသညျ လာ. သင်ပိုမိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်လဲလှယ်ရှာနိုင်ဘို့သင့်ကိုမစောင့်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့အခုအသက်ငယ်စဉ်မြေးဆက်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်မသိခြင်းမရှိသည့်မိုဘိုင်းဖုန်းများရှိပါတယ်အချိန်ဖြစ်ကောင်းသည်သင်မကြိုက်ဘူးရှိရာတစ်ဦးအဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလခဲ့ကြသည်နေသည် [ ... ]
ရော်နယ်အောင်နိုင်ဘား, Irma Schiffer, ကြော်ငြာ Broere, သမဝါယမအခမဲ့မီဒီယာ: အမှန်တရားရှာဖွေနေသူများအတွက် GISS ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်?
အတွက် Filed [AIVD ALARM], NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 15 2017 အပေါ်	• 55 မှတ်ချက်
ဤဆောင်းပါး၌ငါကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာလုံးဝနယ်သာလန်အတွက်ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းအနည်းငယ်ဆောင်းပါးများကိုပါပြီဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကျယ်ပြန့်သွားကြဖို့လိုပါတယ်။ ငါ "လျှို့ဝှက်ချက်ဝန်ဆောင်မှုကထိန်းချုပ်ထားဖို့စာသားကိုးကားပါ။ နယ်သာလန်မှာကလပ် GISS တောင်းဆိုခဲ့သည်။ [ ... ] သင်အားအမှန်တကယ်သက်သေပြဖို့
အတွက် Filed [AIVD ALARM], NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ဥပမာများ	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 14 2017 အပေါ်	• 74 မှတ်ချက်
ငါမကြာသေးမီလများအတွင်းမှန်မှန်မေးခဲ့ကြ "သင်သည်အဘယ်သို့ရော်နယ်အောင်နိုင်ဘား၏ထင်ပါသလဲ" ငါသည်အစဉ်အမြဲမေးခွန်းရှောင်ရှားသို့မဟုတ်ခေတ္တမျှဖြေကြားခြင်းနှင့်အများအားဖြင့်ကိုယ့်လူမျိုးကိုထိုကဲ့သို့သောထောင်ချောက်သို့လမ်းလျှောက်မယ်လို့မည်မျှကောင်းစွာကြည့်ရှုကြပါပြီ။ ကြောင်းရော်နယ်အောင်နိုင်ဘားတစ်ခုသရုပ်ဆောင်သောကွောငျ့, တစ်ဦးသည်အလွန်လက်မကဲ့သို့ငါ့ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ မရငါ [ ... ] ရှိသည်
"Desinfo အေးဂျင့်များနှင့်ဂြိုလ်သား '' VS '' အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကပြဿနာတွေနဲ့လာရန်အရေးယူအကြံပြု ''
အတွက် Filed [AIVD ALARM], NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 30 2017 အပေါ်	•7မှတ်ချက်
ဒါဟာယခုက 'matrix ကို' 'စကားပြောကာအစစ်အမှန်လမ်းကြောင်းသစ်ဟုခေါ်သည်။ Martijn ဗန် Staveren အကြောင်းကိုငါ့အနောက်ဆုံးဆောင်းပါး၌ငါ [ ... ] ငါ့အအမြင်များတွင်အေးဂျင့် desinfo, ထို့နောက် (စွပ်စွဲ) အသိပညာနှင့်သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုဒီလိုပါပဲသစ်တောအတွင်းကိုပို့ဖို့နဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆွဲကြဘူးနိုးထများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပုံကိုရှင်းပြခဲ့
ပြင်သစ် Heslinga ပြင်းထန်စွာ psychiatriseert ထင်ဖို့အပြားမြေကြီးတပြင်လူထုံ?
အတွက် Filed [AIVD ALARM], NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ62016 အပေါ်	• 24 မှတ်ချက်
တကယ်တော့သူကဆပ်ကပ်လူပြက်များ, ဤအမျိုးအစားများကိုလျစ်လျူရှုဖို့ သာ. ကောင်း၏, ဒါပေမယ့်ပြင်သစ် Heslinga ယခုအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာအဖြစ်တွန်းခံရသည်သင်ဒီမှာကအမည်စာရင်းတင်သွင်းသင့်ပါတယ်။ အရူးအတွေးများကိုဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မဆိုကြင်နာလင့်ထားသည်မှစတင်နည်းဗျူဟာအသစ်တစ်ခု PSYOP (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး) ပုံရှိပါတယ်။ [ ... ] အဆိုပါ '' အပြား
အတွက် Filed [AIVD ALARM], NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ42016 အပေါ်	• 8 မှတ်ချက်
လုပ် 2015 ကြီးမားပျော့သွားတာကိုကတည်းကရုတ်တရက်စရာရှိသောကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က '' အပြားမြေကြီးတပြင်သီအိုရီ "ကျွန်မတမင်တကာ, ကတ်များလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသင်တန်း၏ဒဏ်ဍာရီဒဏ္ဍာရီပြည်သင်္ချာနှင့်ရူပဗေဒကိုအနည်းငယ်အခြေခံအသိပညာနှင့်အတူအဘယ်သူကိုမျှရန်ရည်ညွှန်းနိုင်သည့်သီအိုရီ, ဒါပေမယ့်ဒီ 'လှုပ်ရှားမှု' 'ပေါ်ပေါက်ရေး [ ... ] ပြီးပြည့်စုံသည်
Flatearth သို့မဟုတ်ပြားမြေကြီးတပြင်သီအိုရီပျက်စီး၏အုပ်စုတစုအကြားသုတေသီများနေရာတစ် PSYOP ဖြစ်ပါသည်
အတွက် Filed [AIVD ALARM], NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 29 2016 အပေါ်	• 22 မှတ်ချက်
အင်တာနက်ကိုတွင်ရုပ်ရှင်များ, YouTube ချန်နယ်နဲ့ Web မှတ်တမ်းများပင်မမီဒီယာနှင့်ထူထောင်မှုကျွန်တော်တို့ကိုခိုးဘယ်လောက်သို့ထင်ရသောအလေးအနက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖျော်ဖြေယခုအချိန်တွင်ကွဲ။ ဤရွေ့ကားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမကြာခဏကောင်းသောသုတေသနမှလာကြ၏။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ယခုဖြစ်ပျက်နေသည် [ ... ] (ကအရမ်းစမတ်နှင့်သန့်စင်ပြီး) ဤသီအိုရီများ "သုတေသီများ" ဟုအဆိုပါပြားချပ်ချပ်ချိတ်ဆက်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Oxel op Corona Crisis Covid-19 သည် Bill Gates ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော ၂၀၀၃ MS Blaster ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသတိရစေသည်